Soo dejisan RealPlayer 1.12.45 – Android – Vessoft
Bogga rasmiga ah: RealPlayer
RealPlayer – waa software si loo abaabulo faylasha warbaahinta ee kaydinta daruurtu. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad soo dejiso oo aad u eegto faylasha warbaahinta ee laga duubo kaydinta daruuriga ee tayo sare leh. RealPlayer waxaa lagu dhejiyaa xisaab kaas oo bixiya helitaanka faylasha qalabka kala duwan. Software sidoo kale waxay awood u leedahay in ay wax ka beddesho macluumaadka by email, Facebook ama iyada oo loo abuurayo xiriirinta. RealPlayer waxeey ku siineysaa xaddad xaddidan oo ku jirta serverka laakiin waxaa lagu kordhin karaa lacag dheeraad ah.
Waxay maamushaa faylasha warbaahinta ee kaydinta daruurta
Taageerida qaabab badan
Faylasha iyo aragtida faylasha warbaahinta ee adeegga
Soo dejisan RealPlayer
Faallo ku saabsan RealPlayer
RealPlayer Xirfadaha la xiriira